Waxaa jira xoogaa farxad ah oo nolosha ka mid ah oo aan la beddeli karin. Urka qaxwaha subaxa. Maalinta gu'ga, fur dariishadaha gurigaaga oo dhan. Kabashadii ugu horreysay ee dhalo Coke ah. Si kastaba ha noqotee, runti ma jiraan wax ka fiican sidii aad uga soo bixi lahayd qubayska oo aad u qaban lahayd tuwaal jilicsan oo cusub si aad u qalajiso. Waxaa jira ...
Gogosha hudheelka, taas oo ah, linenka, si isa soo taraysa u noqotay baahi maalinle ah oo lama huraan u ah safarada ganacsiga nolosha dadka. Iyada oo la hagaajinayo heerka nolosha dadka ee maadiga ah iyo isbeddelka fikradda isticmaalka, gogosha hudheelku waa sii kordheysaa iyada oo la raadinayo quruxda dabiiciga ah, highlig ...
Marka hore, nolosha linenka hudheelka linenka laga isticmaalo hudheelka ayaa leh cimri cayiman. Sidaa darteed, marka lagu daro dhaqitaanka caadiga ah ee qalabka cudbiga, qolka dharka lagu dhaqo ee hoteelka ayaa sidoo kale u baahan in la ilaaliyo gogosha si loo kordhiyo nolosha adeegga. Haddii si xad dhaaf ah loo isticmaalo, waxaa jiri doona biyo xire ...
Farqiga u dhexeeya goose down iyo duck down
Buuxinta alaabada hoos u dhacda waxaa badanaa loo qaybiyaa goose cad, hoos cirro hoose, duck cad, hoos duck hoos, goose hoos iyo duck hoos. Marka laga hadlayo diirimaadka, goose hoos ayaa ka wanaagsan duck hoos. Guud ahaan marka la hadlayo, mugga gunta hoose ee fiber ayaa ka weyn tan tan duck hoos ...
Sida loo dhaqo duvet hotel
Waxaa jira laba nooc oo hudheello hudheel ah. Midkood hoos ayuu u jilicsan yahay kan kalena waa qalbi qabooge polyfiber ama gogol. Qalajinta ama mashiinka lagu dhaqo guud ahaan laguma talinayo in la dhaqo qoob-ka-ciyaarka, maadaama labadan hab ee wax lagu dhaqo ay dhaawici karaan dharka ama buuxinta tayada gogosha. Sidaa darteed, duvet ayaa ugu fiican ...
tuwaalka qubeyska la dhigo, tuwaalka qubeyska, tuwaalka wajiga, daboolka dharka, Shukumaan cudbi ah, Tuwaalo midab leh,